ဒီဇင်ဘာလ 2014 |7၏စာမျက်နှာ 13 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2014 » ဒီဇင်ဘာလ (စာမျက်နှာ 7)
Sonnet Optical Thunderbolt cable ၏နယူးမိသားစုမိတ်ဆက်
fiber optic cable စွမ်းဆောင်ရည် Irvine, ကာလီဖိုးနီးယား၏ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲရှည်လျားတဲ့ distance ကို span - ။ ဒီဇင်ဘာ 10, 2014 - Sonnet Technologies ကယနေ့ထုတ်လုပ်မှု၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံအတွက်မဟုတ်တော့အကွာအဝေးကျော်ကွန်ပျူတာများနှင့်စက်ကိရိယာများကိုချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဇိုင်း optical Thunderbolt (TM) ကေဘယ်လ်ကြိုးများအသစ်တခုလိုင်းမိတ်ဆက် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ။ 20Gbps Thunderbolt2နှင့် 10Gbps Thunderbolt ဆက်သွယ်မှု, အ Sonnet Optical Thunderbolt cable နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအထောကျပံ့မှုနှင့်အတူ ...
သင်တစ်ဦးဗီဒီယိုအမှတ်တရမှာမကြည့်နဲ့သဘောကျပြီးမရနိုင်ပါ။ သေချာတာပေါ့, သူတို့ကတဦးတည်း (အများအားဖြင့်အမှန်တကယ် High-end ကုမ္ပဏီများအတွက် reserved) ကိုယ်တိုင်ကနှင့်တစ်အံ့ဩဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သင်နေလျှင်အများကြီးစည်းဝေးကြီးများမှာအမြားအပုံပေါ်ဒါမှမဟုတ်သင်ကသူတို့ကိုတွင်တွေ့မြင်င့်ပြသထားတယ်နှင့်အမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင် / ဝင်စားခြင်းငှါ အစဉ်အဆက်၏ဖြစ်ရပ်မှန်များတဦးတည်းဖန်တီးသို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းထားဖို့တာဝန်တာဝန်ပေးအပ် ...
Presteigne နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမောင်းထုတ်ရန်ဒါဝိဒ်သည် O'Carroll ခန့်အပ်
Presteigne အသံလွှင့်အရစ်ကျနည်းပညာက၎င်း၏အသစ်သောဦးခေါင်းအဖြစ်လူသိများစက်မှုလုပ်ငန်းကိန်းဂဏန်းသည်ဒါဝိဒ် O'Carroll ခနျ့ထား - Presteigne နည်းပညာနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု Crawley အနောက် Sussex, 12 ဒီဇင်ဘာလ 2014 မောင်းထုတ်ရန်ဒါဝိဒ်သည် O'Carroll ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ သူကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမန်နေဂျာအဖြစ်သူက BBC Prom, ကို Global X ကိုဂိမ်းများနှင့် Wimbledon အပါအဝင်အဓိကစီမံကိန်းတာဝန်ရှိရှိရာဦးဆောင်အပြင်ဘက်ထုတ်လွှင့်ကုမ္ပဏီ NEP ရူပါရုံမှကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုပွဲဖြစ်သည်။ ...
Chainsaw Services ဆုပေးပွဲရှိုးများအတွက် Excellence တဲ့အမွေအနှစ်အပေါ်ဆောက်
ဟောလိဝုဒ် post ကိုစက်ရုံ, အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲအပါအဝင်အဆိုပါကနေဒီစင်တာတွင်ဂုဏ်ထူးနှင့်ရွှေကမ္ဘာလုံး TV ပေါ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးဆုရှိုးအချို့အဘို့အအယ်ဒီတာအဖွဲ့နှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ အမျိုးမျိုးသောအုပ်စုများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများယခင်ရဲ့အကောင်းဆုံးအောင်မြင်မှုတွေကိုချီးမြှောက်အထိဂီယာအဖြစ် Los Angeles-အဆိုပါနှစ်သစ်ကူး၏ဆိုက်ရောက်ဟောလိဝုဒ်အတွက်ဆုပေးပွဲရာသီရဲ့ start ခြေတစ်လှမ်း ...
အဆင့်မြင့်အသံလွှင့် Solutions နှင့်အတူလက်ပံအဝန်းမီဒီယာအဆင့်မြှင့်မှုများကွင်းဆင်းကင်မရာများကို
SEATAC, WA - Professional ကဗွီဒီယိုနဲ့အသံစနစ်များကိုပေါင်းစပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအဆင့်မြင့်အသံလွှင့်ဖြေရှင်းနည်း (ကို ABS) ယနေ့လက်ပံအဝန်းမီဒီယာ (PCM), အစိုးရနဲ့လက်ပံ, Ore ခြောက်ချန်နယ်များအတွက်ဒေသခံ programming ကိုထုတ်လုပ်ကြောင်းအများပြည်သူလက်လှမ်းမီဝန်ဆောင်မှုပေးထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်နီးပါး 30 JVC ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ၎င်း၏အသိုင်းအဝိုင်းထုတ်လုပ်သူများအဘို့လယ်ပြင်၌ကင်မရာက၎င်း၏ရှယ်ယာ upgrade လုပ်ဖို့ကို ABS မှတဆင့်ကင်မရာများ ProHD ။ Bea Coulter အဆိုအရ ...
ထုတ်လွှင့် Pix ကုန်သွယ်ရေး-ခုနှစ်တွင်ကမ်းလှမ်း Slate စနစ်များများအတွက်မြှင့်တင်ရေး
Billerica, မက်ဆာချူးဆက် - အသံလွှင့် Pix ™ယင်း၏ Slate လက်ရှိဖောက်သည်ရှိပြီးသား Slate ™အသစ်တစ်ခုကိုကျောက်™သို့မဟုတ် Mica ™ system အတွက်ဘက်ပေါင်းစုံထုတ်လုပ်မှုခလုတ်ထဲမှာရှိရောင်းဝယ်ဖောက်ရန်ခွင့်ပြုသည်အရာကိုမြှင့်တင်ရေး, Upgrade ကြေညာခဲ့သည်။ အသစ်စနစ်များဇာတိ, HD ထုတ်လုပ်မှုအပါအဝင် Slate ကျော်တိုးတက်မှု၏နံပါတ်, ဂရပ်ဖစ်နဲ့ animations တွေကိုနာရီ 180 မှတက်ကိုင်ကြောင်း Dual-ရုပ်သံလိုင်းကလစ်ဆာဗာများကို ပူဇော်. , တိုးချဲ့ ...
Fairfax မီဒီယာ Quantum StorNext ပလက်ဖောင်းအတူ Next ကိုအဆင့်မှ Xsan ပတ်ဝန်းကျင်ယူ
ပွင့်လင်းသောစနစ်များပူးပေါင်းဆောင်ရွက် San Jose, ကာလီဖိုးနီးယားထိနျးသိမျးနေစဉ်တွင်ပြန်လည်ရေးဆွဲလုပ်ငန်းအသွားအလာကုန်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားနှင့် သာ. ကွီးမွတျ၏အရွယ်မှာအတွက် 40 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ဖွင့်မည် - ဒီဇင်ဘာ 9, 2014 - Quantum ကော်ပိုရေးရှင်း (NYSE: QTM) ။ ယနေ့ Fairfax မီဒီယာ, သြစတြေးလျနှင့်အာရှတစ်ဦးဦးဆောင်မီဒီယာကုမ္ပဏီကြေညာခဲ့သည် , Quantum ရဲ့ StorNext (R) platform ပေါ်တွင်ဗဟိုပြုတဲ့လုပ်ငန်းအသွားအလာတစ်ခုက Apple Xserve-based Xsan ကနေပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါအဆင့်မြှင့်ဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ် ...
ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်ရွက်ပေါက်အဆိုပါ 2014 24 /7လူငယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းကိရိယာရဲ့ Air ကို tripod စနစ်နှင့်အတူကြီးဆွတ်ခူး
ဆစ်ဒနီ, သြစတြေးလျ, ဒီဇင်ဘာ 11, 2014-တဲ့အခါမှာလာမယ့်တက်-and ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ Sophia Morton ရဲ့တိုတောင်းသောရုပ်ရှင်, စွပ်ပြုတ်, အ 24 /7လူငယ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်, Miller ကကင်မရာပံ့ပိုးမှုပစ္စည်းကိရိယာ, ကင်မရာထောက်ခံမှုတီထွင်ဆန်းသစ်၏ထုတ်လုပ်မှုခေါင်းဆောင်တစ်ဦးမှာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆုချီးမြှင့်ခဲ့သည် သူမကသူမ၏ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးစိတ်အားထက်သန်မှုကိုလိုက်ဆက်လက်စေခြင်းငှါဒါဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှု၏ရှည်လျားသောအချိန်ထောက်ခံသူ, နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦးက Air tripod စနစ်နှင့်အတူ Morton ချီးမြှင့် ...
7 ၏စာမျက်နှာ 13«ပထမဦးစွာ...«56789 » 10...နောက်ဆုံး»